Abanye besifazane bayazibuza noma bathi: "Uma isithembu asivunyelwe kangako, bekungeke yini kube okufanayo nge-polyandry? ". Uma indoda ingaba nabafazi abaningana, owesifazane akakwazi kufaneleakanabayeni abaningana ngaphandle kwamatheko ?? Akubona ubulungiswa futhi lokho ??
Kodwa-ke, kwezinye izifunda noma emazweni omhlaba, i-polyandry akuyona, into engekho, kuyindlela ejwayelekile. ENepal, eParaguay, eNigeria phakathi Irigwe, phakathi kwamaMaasai eKenya naseTanzania, e DRC (IDemocratic Republic of Congo) kwezinye izizwe ezifana ne- UBashilele eKasai, enyakatho yeNdiya esifundeni sase UJaunsar-Bawar, ku- UMosuo namaTibet aseChina, phakathi kwabantu abangamaTupi kanye AmaBororos eNingizimu Melika (…). Ukubala kodwa okumbalwa, i-polyandry iyenziwa lapho.
Ngesikhathi kuxoxwa ngesithembu, ukungenelela, kwemisipha kakhulu, kukaSara Camara ifike ngesikhathi esifanele, ebesivuna i-polyandry. Thola ukuphawula okuthukuthele kwalowo ofanelwe yisihloko sokhulumela abesifazane. Emiphefumulweni ezwelayo ukuzithiba!
Sara Camara : “Ngivuna iPolyandry, nokuyinto enhle. Ukuthi thina, abesifazane babe futhi nethuba lokuba nabayeni abayisithupha noma ngaphezulu ngaphandle kwethabhu. Isizathu ?? Well, having 6 men who give us whims kanye nemali. Abesifazane baphakeme emhlabeni, abesilisa baphansi kunathi. Ngakho-ke ngiphikisana nesithembu samadoda, indoda ingaba nomfazi oyedwa kuphela hhayi okunye, uma ingakwamukeli lokho, bese ifa yodwa.
Abesilisa bayakhohlisa futhi banamanga, basebenzisa inkolo yabo njengezaba zokuba nezimbongolo ezi-4 noma ezi-5 zokudlala ekhaya, kepha ababathandi ngempela laba besifazane aba-5 ngoba uthando luyindaba yabantu ababili kuphela , awukwazi ukuthanda abesifazane abangaphezu koyedwa ngasikhathi sinye, lokho akukho. Bafuna nje ukuba nabesifazane abaningi ngenxa yezocansi, yingakho kuphela banakho. Futhi mathupha, ngicabanga ukuthi kuyanengeka.
Owesifazane ufanele amadoda angama-100, ngenxa yalesi sizathu nje ukuthi akufanele ucabange nangesithembu. Abesilisa basikweleta inhlonipho nokuzithoba, abesifazane baphakeme ". Ukuphela kwesilinganiso. Ucabangani ??
I-Oct21 09: 01